မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားကြီးသို့ သွားသည့် လှေတင်တံတား တည်ဆောက်မှု ဘုရားပွဲတော်အမီ ပြီးစီးမည်၊ ?? - Yangon Media Group
မင်းဘူး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးမင်းဘူး(စကု)မြို့ မန်း ရွှေစက်တော်ဘုရားကြီးသွားသည့်လမ်းမှ လှေတင်တံတားတည် ဆောက်မှုမှာ ယခုအခါ ၆၅ ရာခိုင် နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီး၊ လာမည့်ဘုရားပွဲတော်အမီပြီးစီးရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တံတားပြီးစီးပါက တံတားဖြတ်သန်းခကောက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့မှ သိရသည်။
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရား (၃) မိုင်လမ်းရှိ မန်းချောင်းဖြတ်လှေတင် တံတား၏အရှည်ပေ ၅ဝဝ၊ အကျယ် ပေ ၃ဝ၊ အမြင့်ပေ ၂ဝနှင့် တံတားတိုင်ပေါင်းရှစ်တိုင်ပါရှိပြီး အဆိုပါ တံတားကို ဘုရားကြီး၏ ဘဏ္ဍာထဲမှငွေကျပ်သန်း ၁၄ဝဝ ဖြင့် တံတား တည်ဆောက်ရေး၊ အထူးအဖွဲ့ (၅) ဆိပ်ဖြူမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက် ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီလှေတင်တံတားကြီး တည် ဆောက်တာက ဘုရားဖူးတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ ပြည်သူလူထု တွေရဲ့ ချွေးနှဲစာနဲ့ လှူဒါန်းထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငွေတွေနဲ့ လှေတင်တံတားကို ဆောက်လုပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရားဖူး၊ ရဟန်းရှင်၊ ပြည်သူလူထုတွေ စိတ်ချမ်းသာ အောင်တံတားကြီးကို အခွန်အခ ကောက်ခံရန် လောလောဆယ်ဆယ် အစီအစဉ်မရှိပါဘူး”ဟု ဂေါပက ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းလှိုင်က ပြောကြား သည်။
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲ တော်အား ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပြီး ယခုတည်ဆောက်နေသော တံတားပြီးစီးပါက မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားသို့ ရာသီမရွေးဘုရားဖူးများ လာရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူများယခင်ကကဲ့သို့ မိုးတွင်းတွင် အခက်အခဲမဖြစ်တော့ဘဲ အချိန်မရွေး ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အာဆီယံတက္ကသိုလ်များအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြ??